MonRaMon : မန်ရမန်
တိုင်ပကဵတုပ်မ္ဂး လညာတ်ဟွံတုပ်လေဝ် အာမွဲကရောံ ဒးဂွံရောင်
လေးဖြူ ဆိုသလို "မင်းမှ မင်းပဲ"တဲ့
ဦးရဲ့ရင်ကို လင်းက လွဲရင် ဘယ်သူ့မှ ရင်ခုန်ချက် ထက်မြန်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ (အများကြီးမှ အများကြီးနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်)။ ဒါပေမယ့် လင်းလောက် ဦးရဲ့ရင်ခုန်သံ မြန်စေမယ့်လူ ဦး ရှာလို့ မရှာသေးဘူး။
ပထမဆုံး ညအိပ်ခရီးကို လင်း ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ အချင်းချင်းမို့ ရင်ခုန်သံ သိပ်မကွာဘူး ထင်တယ်။ ဟိုးရောက်တော့ လင်းရဲ့ အမက "မင်းတို့ ဘာလို့ နှစ်ယောက်တည်း လာရတာလဲ"ဆိုတဲ့ ကြိုဆိုခြင်းကို ခံလိုက်ရတော့မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို လင်း မျက်နှာပေါ်မှာ ဖတ်ခွင့် ရလိုက်တယ်။ မိုးကြီးတယ်။ သွားလို့မလွယ်ဘူး။ နောက်နေ့မှ ရောက်မယ် လို့ လှေသမားတွေက အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့ပေမယ့် သွားချင်တဲ့နေရာကို ရောက်ဖြစ်အောင် သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ညအိပ်ခရီးမှန်း အဆောင်ရှင် မပြောခဲ့ရဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းပါတယ်။ သတ္တိ လင်းမှာ ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာ အဲဒီနေ့မှာ ပြတာထက် ဦးကိုယ်တိုင်မှာ ခွင်းယွင်းချက်တွေနဲ့ နောက်ဆံတင်းရမယ့် ကိစ္စတွေနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ်လည်း ပျော်ပါတယ်။ အရမ်းကို ပျော်တယ်။
လင်းရဲ့အမ ဆေးခန်းသွားတော့ နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တယ်။ လင်း ဦးကို ဘာလုပ်ဖို့ခိုင်းခဲ့သလဲ မှတ်မိလား။ ထမင်းချက်ဖို့ မီးမွှေခိုင်းတယ်လေ။ အဲဒီမှာ မီးသွေးပေနေတဲ့ ဦးကို လင်း လှောင်ရယ်နေလိုက်တာ အခုထိ ရှက်သွေးက မကုန်သေးဘူး သိလား။ ဦးမှ မလုပ်တတ်ဘဲ။ လင်း သိရဲ့သားနဲ့ အဲဒီမီးသွေးနဲ့ မီးမွှေခိုင်းတာကိုး။ ဟီးဟီး ပိုရှက်လာပြီး။
ညအချိန်ရောက်တော့ ခရစ်စမတ်လေ။ မှတ်မိလား။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေက သီချင်းလာဆိုတော့ ဦးလည်းး သူတို့လို ဆိုပြချင်လိုက်တာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဦး ဂီတာတီးပြီး သီချင်းဆိုတတ်မှန်း လင်းမှ မသိသေးတာ။ "သူတို့သီချင်းဆိုတာ ကောင်းလိုက်တာနော်"လို့ လင်း ပြောခဲ့တယ်လေ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီညက သီချင်း မဆိုဖြစ်ခဲ့ဘူး။ (လင်းအရှေ့မှာ တစ်ခါဘဲ ဦးကိုယ်တိုင် တီးဆိုပြီး သီချင်းဆိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အတိတ်တုန်းက - ဒီအကြောင်းကို ဖော်ပြပါမယ်"။
အဲဒီညက ဦး ဘုရားခန်းမှာ ဘယ်အိပ်ချင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေး(၂)တည်း အပြင်မှာ အိပ်ပြီး ဦး ဘုရားခန်းမှာ အိပ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီညက ဦးလာပြီး ခြေထောက်လာစမ်းတယ်လေ။ ပထမစမ်းမိတာ လင်းခြေထောက်မဟုတ်မှန်း ဦးလည်း သိတာပေါ့။
နောက်နေ့ကျတော့ မျက်နှာပူသွားတာပေါ့။ (သူတို့ညီမချင်း ဘာပြောနေလဲ မသိဘူး)။ ဒါပေမယ့် လင်း ခြေထောက်ကိုလည်း ဦး ကိုင်ခွင် ရခဲ့ပါတယ် အဲဒီညက။ ဟဲဟဲ။ မနက်မိုးလင်းမှလေ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက လင်းက ဦးဟာ လင်းရဲ့ ချစ်သူပါဆိုတာ အဲဒီမြို့က လူတွေကို ပြောရဲ၊ ပြရဲခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ဦးလည်း အဲဒီထက်မက (ချစ်သူထက်မက) ပြောဖို့ စကားလုံးရှိခဲ့ရင် အခု ပြန်ပြောမှာပါ။ ဧည့်သည်တွေက ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ရောက်သွားတော့ အပြစ်ရှိသူ မျက်နှာပျက်သလိုပေါ့။ ဦးအတွက်တော့။
ဒါပေမယ့် လင်းကို ဦး ချစ်တာလောက် လင်းကို ဘယ်သူကမှ မချစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ လင်းသိမှာပါ။ (အခုလည်း ချစ်တုန်းပါ လင်းရယ်) ဟဲဟဲ။ တကယ်ပြောတာပါ။ ဦး မိန်းကလေး အများကြီးနဲ့ ဆက်ဆံဖူးတယ်။ (အင်္ဂလိပ်လို ဆက်ဆံတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ) ဒါပေမယ့် လင်းသာ ဦးရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းပါ လင်းရယ်။
လင်းသာ မရှိရင် အခု ဦး ဘယ်ဆီရောက်နေမှန်း ဦးကိုယ်တိုင်တောင် ပြန်ကြည့်မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗမာပြည်ပြန်ရဖို့အရေး ဒီလောက်တောင် ခက်ရသလားကွယ်......။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သော လင်းလင်း ဆီသို့ ဘလော့ဘ်ကနေ ပြန်လည် ခံစားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Burmese, Mine, ငါ့ရဲ့မှတ်တမ်း, တမ်းတနေ့စွဲများ
ကြိုးကိုင် ကြိုက်သူ (ဒီမိုကရေစီ ဗဟို မချုပ်ကိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ငါ ချုပ်ကိုင်မှု)
ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် နအဖ နဲ့ အနှစ် (၁၀၀၀)ထောင်ကျော် တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိ(၂)ယောက် ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေ များလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားပြောနေကြတယ်။
အဆင့်နဲနဲမြင့်သူ။ ဘာကြောင့် ငါ့တို့အဖွဲ့ထဲကနေ ထွက်သွားပြီး သူတို့က နောက်ပါတီတစ်ခု ထပ်ထောင်နေကြတာလဲ။
အဆင့်နဲနဲနိမ့်သူ။ ကျနော်တို့ အရင်ဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ပါတီ သုံးနေတဲ့ စနစ် ဥပဒေအပိုင်း ဆွေးနွေးရအောင်လား ဆရာ။
အဆင့်နဲနဲမြင့်သူ။ ငါ့တို့စနစ် ဥပဒေက ဒီတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ဆိုရင် အဆင့်မြင့်ဆုံးပဲ ဆိုတာ မင်းလည်း သိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ် ဆိုတာ ဒီအချိန်မှာ အသင့်လျော်ဆုံး စနစ်ပဲ မဟုတ်လား။
အဆင့်နဲနဲနိမ့်သူက အဲဒီလို ကြားလိုက်တော့ စိတ်မလုံသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဘာကြောင်လဲ ဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီပါတီက နှုတ်ထွက်ပြီး ပါတီအသစ် ထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူလေ။
အဆင့်နဲနဲနိမ့်သူ။ အခု သူတို့က ဒီပါတီကနေ ထွက်သွားပြီးတော့ ပါတီအသစ် ထောင်တယ်ဆိုကတည်းက ဒီပါတီရဲ့ စနစ်ကို မကြိုက်တာတော့ မှန်တာပဲ မဟုတ်လား ဆရာ။
အဆင့်နဲနဲမြင့်သူ။ ဒီစနစ်ထက် ကောင်းတာမှ မရှိတာကွ။ ငါ မေးတာက သူတို့တွေ ဘာလို့ ဒီပါတီကနေ ထွက်သွားကြတာကို မေးတာကွ။
အဆင့်နဲနဲနိမ့်သူက မျက်နှာအနေအထား၊ အသံအနေအထား ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ဖြေလိုက်ပါသတဲ့။
အဆင့်နဲနဲနိမ့်သူ။ ဆရာကလည်း ဒီမိုကရေစီ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို သူတို့ကမှ မကြိုက်တာ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုက ဗဟိုကဘဲ ချုပ်ကိုင်တာ။ သူတို့က ချုပ်ကိုင်ရတာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့ ကြိုက်တာက ဒီမိုကရေစီ ငါချုပ်ကိုင်မှု တဲ့။ ဒါမှ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးကိုင်လို့ရတာပေါ့။
Labels: Burmese, Joke, ဂရိုင်ဂအ႘, ဟာသ
သောကြာနေ့ ညနေ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းဆရာက သူ့တပည့်တွေကို ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အိမ်စာ အဖြစ် ပေးသွားရန်အတွက် "နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဘယ်လဲ။ ကျောင်းပိတ်ရက်(၂)ရက်မှာ လေ့လာထား။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ရက်ကျရင် တပည့်တို့ အဖြေပေးရမယ် ကြားလား"ဟု မှာကြားလိုက်သည်။
မင်းအာသံ လို့ အမည်ရတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က သူ့ဆရာရဲ့ ပဟေဠိကို ဖြေကြားနိုင်ဖို့ အဖေကို ပူဆာတော့ သူ့အဖေက "နိုင်ငံရေး ဆိုတာ သား နားလည်အော ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောရရင် အခု အဖေတို့ အိမ်ထောင်လိုပဲပေါ့။ အဖေက ငွေရှာပေးတဲ့သူ။ စီးပွားရေးပေါ့။ သားရဲ့ အမေက ရလာတဲ့ပိုက်ဆံကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူ ဆိုတော့ အစိုးရပေါ့ကွယ်။ အဲ သားက ပြည်သူလူထုပေါ့။ သားရဲ့ ညီလေးက တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ပေါ့။ ရှင်းပြီလား"ဟု ပြန်ဖြေပေးလိုက်ရာ မင်းအာသံမှာ ပျော်မဆုံး စိတ်ကူးယဉ်နေလေတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ ကျောင်းရောက်သွားတော့ သူ့ဆရာက "ကဲ နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဘယ်သူသိသလဲ" မင်းအာသံ ကြားလိုက်တာနဲ့ တက်ကြွစွာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး "ကျနော် သိတယ် ဆရာ"၊ "ဟာ တော်လှချည်းလား၊ ဆိုစမ်းပါဦး တပည့်ရေ"ဟု ဖွင့်ပေးလိုက်ရာ မင်းအာသံ က "နိုင်ငံရေးဆိုတာ အရမ်း အရမ်းကို ရှုပ်ထွေးလေးနက်ပါတယ် ဆရာ။ အစိုးရက အိပ်ပြီးရင် မထတော့ဘူး။ အိပ်ပုတ်ကြီးတယ် ဆရာ။ စီးပွားရေး ကလည်း ဖောက်ပြန်နေတယ်။ ပြည်သူလူထုက အရမ်း ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ဟို တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကလည်း စုတ်ပြတ်သတ်အောင် နှံလိုက်တာ ဆရာရယ်"ဟု အားရပါးရ ပြောလိုက်လေတော့သည်။
Labels: Burmese, Joke ဟာသ, ဂရိုင်ဂအ႘
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာ နှင့် မေးမြန်းချက်
စုစည်းညီညွှတ်မှု ပျက်ပြားအောင် သပ်လျှိုဖြိုခွဲတာပဲ
Thu 10 Sep 2009, အာကာ
ပြည်တွင်းဖေါက်ခွဲရေးကိစ္စ စွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သတ်၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
မေး။ ။ ကျိုက်မရောမြို့နယ် (မယက) ရုံးကနေ (၁၄၊ ၈၊ ၀၉) ရက်နေ့ က သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာကောင်စီတွေကို ညွှန်ကြားစာတစောင် ထုတ် ထားတယ်။ အဲဒီမှာ (မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင် လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့) က လူအယောက် (၆၀) ကို ဖေါက်ခွဲရေးနဲ့ ဝါဒဖြန့်ချိရေး လုပ်ဖို့ ပြည်တွင်းကို စေလွှတ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ ထဲမှာ အတွင်းရေးမှူး နာမည်လည်း ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြား သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီကိစ္စ ပြောပြပေးပါလား?
ဖြေ။ ။ ကြားပြီးပြီ၊ နယ်ကသတင်း ပေးပို့လာလို့ သိရတယ်။ ကြားသိပြီး တော့ သေချာအောင် အဲဒီစာကို ရှာပို့ပေးဖို့ မှာလိုက်တယ်။ စာကိုတွေ့ရပြီး ပြီ။ အဲဒီစာထဲမှာ မော်လမြိုင် (ခယက) ရုံးရဲ့ (၁၀၊ ၈၊ ၀၉) ရက်နေ့က ညွှန်ကြားချက်အရ မြို့နယ် (မယက) ရုံးကနေ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်တွေကို ထပ်ဆင့်ညွှန် ကြားတယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။
ဒီလိုအသေအချာတွေ့ရှိပြီးတော့ ကျနော်တို့လူတွေကနေတဆင့် သက်ဆိုင် ရာအာဏာပိုင်တွေကို မေးခိုင်းထားတယ်။ သူတို့ပြောထားတဲ့ ကျနော်အပါ အဝင် ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင် (၇) ဦး တွေ့ဆုံပြီး စီစဉ်စေလွှတ်တယ်ဆို တဲ့ကိစ္စ မှာ ဘယ်မှာတွေ့ဆုံကြတယ်။ ဘယ်နေ့က တွေ့ကြတယ်။ အခြားဘာအ ထောက်အထားတွေ ဘယ်လောက်ရထားတယ်ဆိုတာ မေးခိုင်းထားတယ် ခင်ဗျာ့။ ဒါတွေ သူတို့မဖြေကြားနိုင်ဘူး။ ဘာမှ အထောက်အထား မပြနိုင် ခဲ့ဘူး။
မေး။ ။ ဘာကြောင့် သူတို့ကို ဒီလိုမေးရတာလဲ?
ဖြေ။ ။ သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းတခုအနေနဲ့ အရမ်းမစွပ်စွဲဖို့၊ တိကျသေချာမှ ပြောဖို့ဆိုတာကို ထောက်ပြချင်လို့ တကြောင်း၊ ပြီးတော့ ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာ အခြေအမြစ်မရှိ လုပ်ကြံထားတဲ့ ကိစ္စဆိုတာ ရှင်းပြချင်လို့ ဖြစ်တယ်။
မေး။ ။ အတွင်းရေးမှူးဘက်က ဘယ်လိုရှင်းပြချင်လဲ?
ဖြေ။ ။ သူတို့ပြောတဲ့ (၈) လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်အချိန်မှာ ပြန်လည် နိုးထလာရေးကိစ္စက သြဂုတ်လဆန်းမှာဆိုတော့ အဲဒီအချိန်က ကျနော်ဗ ဟိုဌာနချုပ်မှာ ရှိနေတာဗျ။ ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းကတည်းက အရေးပေါ်ဗ ဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးရှိလို့ ကျနော်ဗဟိုကို ရောက်နေပါပြီ။ အဲဒီအ ချိန်မတိုင်မီ တစ်လနှစ်လလောက်ကလည်း ကျနော် ဒီဝန်းကျင်မှာ မရှိဘူး၊ အဝေးကြီးက ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ကို ရောက်နေတယ်။ ပြည်ပက ရောက်လာ တာနဲ့ မကြာခင်မှာ ဗဟိုဌာနချုပ်ကို ရောက်သွားတာပဲ။ သူတို့ပြောထားတဲ့ လူတွေနဲ့ သွားတွေ့ဖို့ဆိုတာ အချိန်လည်း မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့စွပ်စွဲ သလို မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင်တွေရော အပြင်ကလူတွေပါ လူတော်တော်များများ သိပါတယ်။
မေး။ ။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့်ဒီလို စွပ်စွဲရတယ်လို့ ထင်မြင်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျနော်မြင်တာက ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းကို နယ်ခြားစောင့် တပ် ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်သူ့စစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အသွင်ပြောင်းဖို့ ပြောတာကို ကျနော် တို့ဘက်က လက်မခံလို့ ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ တဦးအပေါ် တဦး မကျေနပ်မှုတွေ ဖြစ်၊ အထင်အမြင်တွေ မှားပြီး စုစည်းညီညွှတ်မှု ပျက်ပြားအောင် သပ်လျှိုဖြိုခွဲတာပဲလို့ မြင်တယ်။
အနိမ့်ဆုံးအဆင့် အေးအေးချမ်းချမ်းနေလိုတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ထိန်းသိမ်းထားလိုတဲ့ လူတွေ ကျနော့်အပေါ် ဆန့်ကျင်တိုက် ခိုက်လာမယ်လို့ သူတို့တွက်ထားပုံ ပေါ်တယ်။ တကယ်လို့ ကျနော်တို့အ ဖွဲ့ထဲမှာ ကျနော့်အပေါ် အမြင်ရှင်းပြီး တစုံတရာ အရေးမယူဘူးဆိုရင် အဖွဲ့ အစည်းအနေနဲ့ ဒီမလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖုံးကွယ် အကာအကွယ်ပေး နေတယ်။ အလိုတူ အလိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်ပြီး သူတို့ဘက်က အရေးယူလာရင် သူတို့အလွန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး ထွက်အောင် လုပ်တာပဲလို့ မြင်တယ်။
မေး။ ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင် အများကြီးထဲမှာ အတွင်းရေးမှူးတဦးကိုပဲ ရွေးပြီး ဒီလိုလုပ်တာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျနော်ဟာ သူတို့ရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ မကြာခ ဏ ဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ထားပေမဲ့ သူတို့နဲ့ သွားလာဆက်ဆံရင်းနှီးအောင် မပေါင်းသင်းပဲ ရှင်းရှင်း နေတာလည်း ပါမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး။ ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအပေါ်မှာ အတွင်းရေးမှူး ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘောက စစ်ရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနေတာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများလွန်းပြီး ပြေလည် စရာလည်း လမ်းမမြင်လို့ နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာဖို့ ဖြစ် တယ်။ ဒါမျိုးကို ကျနော် သဘောတူလက်ခံတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက နိုင်ငံ ရေးအရလည်း မဆွေးနွေးဘူး။ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြိုကွဲပျက်စီးအောင် လုပ်နေတာမျိုးကိုတော့ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ရယ်လို့ ကျနော်မခံယူနိုင်ဘူး။
မေး။ ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုးကန့်မှာဖြစ်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေအပါအဝင် အများပြည်သူကို အတွင်းရေးမှူးဘာ ပြောချင် သလဲ?
ဖြေ။ ။ ကိုးကန့်အဖွဲ့အပေါ်မှာ သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူ့စစ်ပုံစံကို လက်မခံလို့ တစိပ်ရရ၊ တဖဲ့ရရ သူတို့လက် ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် ဖဲ့ထုတ်မွေးယူပြီး ရန်တိုက်ပေးဖို့ လုပ်တာပဲလို့ မြင်တယ်။ တခြားအပစ် ရပ်အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာလည်း ဒီလိုခပ်ဆင်ဆင် နည်းမျိုးနဲ့ လုပ် လာမှာပဲ၊ ဒါက အစပဲလို့မြင်တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ သတိကြီးကြီးထားဖို့ လို တယ်။
အများပြည်သူကို ချင့်ချိန်နိုင်အောင် ပြောပြလိုတာက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် (၆၀) ကျော် ဖြစ်နေခဲ့လို့ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ဘယ် လောက်အထိ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာ အများသိပါ တယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ကြလို့ ပြည်တွင်းစစ်မီး အရှိန်လျော့လာတယ်။ ရင်းနှီးမှု ယုံကြည်မှုအချို့ ရလာတယ်။ ဒါကိုမမြင် သင်္ခဏ်းစာမယူနိုင်သေးပဲ လက်နက်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်၊ မမှန်မကန်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဦးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ပြည်ထောင်စုဟာ ရှေ့တဆင့်မှာ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားမယ့် အခြေ အနေကို ရောက်သွားမယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒီကိစ္စ လေးလေးနက်နက် သုံးသပ်ကြပါလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။
Labels: Feature, Interveiw
စစ်အစိုးရက မွန်ပြည်သစ်၏ အရေးပါသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ကန့်သတ်လာ
ဝီရ / ခေတ်ပြိုင်
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းမည်မဟုတ်ဟု ငြင်းဆိုထားသည့် အပစ်ရပ် မွန်ပြည်သစ်အား ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေးနှင့် ပါတီအတွက် အရေးပါသည့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်တို့အား နအဖ စစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများ ပြုလုပ်လာကြောင်း သိရသည်။
ပါတီ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ရော့စနှင့်အဖွဲ့အား အရှေ့တောင်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးက လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ်လ (၂၈)ရက်နေ့က တွေ့ဆုံရာတွင် စစ်အစိုးရဘက်က ယင်းကဲ့သို့ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သထုံခရိုင်ရုံးမှ မွန်ပြည်သစ် ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးက "လူထုကို စည်းရုံးရေး လုပ်လို့မရဘူးလို့ သူတို့တောင်းဆိုတယ်။ ဒါက လူထုနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ထိတွေ့မှု ရဖို့ အပစ်ရပ်လာကတည်းက ပါတီက ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒလမ်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မလုပ်ဘူးဆိုတာက သူ(စစ်အစိုးရ)တို့ တားလို့ရတဲ့အရာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဒါက ရပ်ဖို့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ဘဲ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက တိုင်းမှူးကို ပြောခဲ့တယ်"ဟု ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်က ခေတ်ပြိုင်သို့ ယနေ့ ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ၌ တပ်ဖွဲ့ အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စအပြင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အခွန်ကောက်ခံနေမှုနှင့် ပါတီ၏ သြဇာသက်ရောက်ခြင်း မရှိသည့်ဒေသများတွင် တရားစီရင်ရေး မဆောင်ရွက်ရန်လည်း နအဖ တိုင်းမှူး၏ တောင်းဆိုချက်တွင် ပါဝင်သည်။
တရားစီရင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီက ချမှတ်ထားရာတွင် မွန်ပြည်သစ်၏ အုပ်ချုပ်နယ်မြေ ခရိုင်(၃)ခုမှ ကျေးရွာပေါင်း(၃၀၀)ကျော်အနက် စစ်အစိုးရနှင့် မွန်ပြည်သစ်တို့ ပူးတွဲအုပ်ချုပ်သည့် ကျေးရွာပေါင်း (၉၀)နီးပါး ရှိပြီး မွန်ပြည်သစ်၏ သီးသန့်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ ရွာပေါင်း (၉၀)ကျော် ရှိသည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ စရင်းဇယားအရ သိရသည်။ ကျန်ရှိသည့် ကျေးရွာ(၁၀၀)ကျော်မှာ စစ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒအတိုင်းသာ ဖြစ်စေရမည်ဟု စစ်အစိုးရအား တုန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ မွန်ပြည်သစ် အရာရှိတစ်ဦးက "ကျနော်တို့ပါတီက ပါတီ လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်အားနဲ့ကိုယ် ရုန်းကန်နေရတာပါ။ နအဖဆီက ထောက်ပံ့မှုတွေ မရှိပါဘူး။ အကောက်အခွန်လမ်းကြေးတွေက ဆက်လက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့လောက်ဘဲ ရှိပါတယ်"ဟု ပြောကြားပြီး အမျိုးသားညီလာခံသို့ ပါတီမှ တက်ရောက်ခြင်း မပြုသည့် (၂၀၀၅)ခုနှစ်နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရက လစဉ် ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ကျပ်သိန်း(၄၀)ဝန်းကျင်ကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရသည်။
(၁၄)နှစ်ကျော် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ထားသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ရေးတို့အား လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့၌ တရားဝင် ပယ်ချထားသည့်အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာ ဖြေရှင်းရန် စစ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းထားသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီက စစ်အစိုးရ၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်မခံကြောင်း တရားဝင် ပြန်ကြားခဲ့သည့်နောက် ပါတီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်တချို့ ၏ မရွေ့ပြောင်းနိုင်သည့် အိမ်မြေခြံကို ရောင်းချခြင်း ခွင့်မပြုကြောင်း စစ်အစိုးရက ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
Labels: Burmese, News, ပရိုင်, သတင်း
အိပ်မက်ပုံပြင် - အငဲ
တေးဆို - အငဲ
အယ်လ်ဘမ် - ကိုး
Key - E (Dbm)
Intro - Dbm A B Bb7
ငါ့အာရုံထဲ တိုးဝင် နေရာယူရင်း
ကောင်းကင်ပြင် မိုးသားအလယ် / ထဲ
ခေါ်သံများလား မပီပြင် ဝိုးတဝါး မိုးသား များထဲ
တွေဝေဆဲပဲ ကမ္ဘာမြေပြင် အဆုံးစွန်
Db Db A B
ထွက်ပြေး ဝေး တို့အရိပ်တွေလည်း ချောက်နက်တွေထဲ
Db Db A B A
ထွက်ပြေး ဝေး တို့အတိတ်တွေလည်း အိပ်မက်တွေထဲ ပျောက်ကွယ်အဝေး
ထွက်ပြေး ဝေး တို့အရိပ်တွေလည်း မိုးသားတွေထဲ ပျောက်ကွယ် အဝေး
Labels: Burmese, Movie, Song
နာမည်ကြီး ရော့ခ်အဆိုတော် အငဲမှာ အခြားအဆိုတော်တွေထက် ထူးခြားမှုတွေ ရှိတယ်။ သူရဲ့ယခင်တေးစီးရီးတွေမှာလည်း ကိန်းဂဏန်းတွေပါတဲ့သီချင်းတွေ မပါပေမဲ့ တေးစီးရီးရဲ့ နာမည်ကိုကျတော့ ဘယ်နှခွေမြောက် ဆိုပြီးတော့ နာမည်အဆန်းလေးတွေ ပေးတတ်တယ်။
သူရဲ့ (၆)ခွေမြောက် တေးစီးရီးကို ဆဌမအာရုံ ဆိုပြီး ပေးခဲ့တယ်။ (၇)နှစ်ခွေမြောက်ကို ခုနှစ်ထွေအက တဲ့။ (၈)ခွေမြောက်ဆိုရင် ရှစ်သိန်းရှစ်သောင်းကမ္ဘာ လို့ ပထမက ပေးခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဆင်ဆာကြောင့်လား၊ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိဘူး။ နောက်ပိုင်း အခွေထွက်လာတော့ ဇစ်မြစ် ဆိုပြီး ဖြစ်သွားရော။ (ဘာမှ မဆိုင်ဘူ့းနော်)။
စက်တင်ဘာ ၉ ၂၀၀၉ ဒီနေ့မှာ ထွက်တဲ့(၉)ခွေမြောက် စီးရီးကို ကျနော့်လို မြေခြားမှာ ရှိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နားမထောင်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ထုတ်လုပ်သူနဲ့ အငဲ ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျနော် အခုလေးဘဲ ကာဗာရော၊ စာအုပ်ရော၊ သီချင်း(၁၂)ပုဒ်လုံးရော ရလိုက်တယ်။ (မူရင်းအခွေ လက်လှမ်းလို့ ဝယ်လို့ရရင်တော့ ဝယ်ထားဦးမှာပါ။ (ချော့တာ အလကား တစ်ခါမှ မဝယ်ဘဲနဲ့) အခု နားထောင်နေတယ်။ အငဲရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် အဖြစ် ထွက်လာတဲ့ ပထမဆုံးအခွေ ဆိုတော့ နားထောင်ချင်နေတာ။ အဲ(၉)ခွေမြောက်မှာ ကိန်းဂဏန်းတွေ ပြန်ပါလာတယ်။ အယ်လ်ဘမ်နာမည်ကို "ကိုး"လို့ ပေးထားတယ်။ (အံရော) (၁၀)ခွေမြောက်ကျရင် ဘာနာမည်ပေးဦးမလဲ မသိဘူး။ ပထမအခေါက် နားထောင်ပြီးသွားတော့ အပုဒ်နံပါတ် (၆) လင်းလင်း ရေးတဲ့ ငါ့စိတ်နဲ့ငါ ဆိုတဲ့သီချင်းက နားထဲမှာ စွဲနေတယ်။ အဲဒီအပိုဒ်က လင်းလင်းရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ တွေ့ရတာ အနည်းဆုံး ဖြစ်ပြီး အငဲရဲ့ သီဆိုဟန် ကောင်းလွန်းတာကြောင့် ကြိုက်တာပါ။ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
အပုဒ် နံပါတ် (၄)က နအဖရဲ့ လှည့်ကွက်ထဲကို မဝင်ချင်တော့တဲ့ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တစ်ယောက်ရဲ့ ငြီးထွားသံလားလို့ နာမည်ကိုက "ဗျူဟာ"တဲ့။ နောနော် ရေးတာ။ အငဲတောင် နောနော် သီချင်းဆိုလိုက်တော့ နောနော်ရဲ့ ဆိုဟန်တွေ သီချင်းမှာ ပါလာတာ တွေ့ရတယ်။
မြင်နေဆဲ မရှောင်နိုင်ဘူး ငါမှားခဲ့
အိပ်မက်ထဲ ပုံစံလာမပေးနဲ့ နောင်တကြီး ငါပြန်မလိုချင်ဘူး။
အေးဆေးနေ ဝေးဝေးနေ နောက်ထပ် ငါ့ကို မလှည့်ဖျားနဲ့
နာရီတိုင်း ဗျူဟာတွေ မခင်းနဲ့ နွံအိုင်မှန်း သိမှတော့ ထပ်မဆင်းဘူး
အဲဒီအထဲက "ပညတ်တွေ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ရှိရက်နဲ့ ငါ့မှာ ကျဆုံးခဲ့"ဆိုတဲ့စာသားက မြန်မာပြည်မှာ သိပ်မှန်တယ်။
ကြားထဲမှာ မောင်မောင်ဇော်လတ် ကလည်း "ငါ့စိတ်ကို မီးမရှို့ပါနဲ့"တဲ့။ အော်ပြီးတော့ကို ဆိုထားတာ။ မောင်မောင်ဇော်လတ် ရေးတဲ့ "နောက်ဆုံးမိနစ်" သီချင်းက လင်းလင်း ဆိုဖူးတဲ့ "ခေါက်ရိုးကျိုး" သီချင်းလို နောက်အခန်း နောက်ဆုံးအနမ်း၊ နောက်ဆုံးလမ်းခွဲချိန် နောက်ဆုံးနေ့ နောက်ဆုံးအထိတော့ နောက်ဆုံးထွက်သက် နောက်ဆုံးအိပ်မက် နောက်ဆုံးမိနစ် နောက်ဆုံးစက္ကန့်" ဆိုပြီးတော့ အငဲရဲ့ ငိုဟန်နဲ့ လူငယ်တွေ ကြိုက်မဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်မှာပါ။ ဒီသီချင်းကလည်း ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် လို့ ပြောထားပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်း တော်တော်များများမှာ နားထောင်ဖူးသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ (အေးလေ သူက ကိုယ်ပိုင်ဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ပေါ့)
နောက်တစ်ပုဒ်က အငဲ တစ်ခါမှ မဆိုဖူးတဲ့ နေ့တိုင်းရုန်းကန်နေရတဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်မက်မက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ဖော်ပြထားတယ်။ ပိုက်ဆံလေးတွေ စုချင်တယ်။ လကုန်တိုင်း ဆုတောင်းဆဲကွယ်၊ တို့နှစ်ယောက်အတွက် အိမ်လိုချင်တယ် တဲ့။ သီချင်းနာမည်ကို "အိမ်"လို့ ပေးထားတယ်။ အငဲ နဲ့ မောင်မောင်ဇော်လတ်ရယ် အိမ်တောင် မရှိသေးဘူးလားကွယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အများကြီး သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအပုဒ်မှာ သံစဉ်နဲ့ စာသားက ကောင်းလွန်းပါတယ်။
ချုပ်ပြောရရင် ဒီအယ်လ်ဘမ်မှာ အငဲရဲ့ အရင်သီချင်းတွေရဲ့ မယ်လိုဒီတွေ ပြန်ကြားနေရတယ်။ ပြီးတော့ အငဲရဲ့ အငွေ့အသက်ထက် သီချင်းရေးသူ မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ လင်းလင်း၊ နောနော်တို့ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေက လွှမ်းထားသလို ဖြစ်နေတယ်။ (တန်းသစ် တေးရေး၊ တေးဆို လင်းလင်း နဲ့ နောနော် ကို လေးဖြူတို့ရော အခု အငဲရော ဘာလို့ အများကြီး သုံးလာရသလဲ မပြောတတ်ဘူး) လေးဖြူရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ အယ်လ်ဘမ် BOB မှာ နှုတ်ပိတ် ဆိုတဲ့ သီချင်းကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးကလည်း ဒီတေးရေးရဲ့ ဆိုဟန်တွေ ပါပါလာတတ်တယ်။ (တေးရေးတွေကလည်း တေးဆိုတွေ ဖြစ်နေတာကိုး နားထောင်ဖူးသူတိုင်း သိပါလိမ့်မယ်) အငဲရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကို ပြန်ရဖို့ သူကိုယ်တိုင် ရေးရလိမ့်မယ်။ အခုခွေမှာ တစ်ပုဒ်မှ သူ မရေးထားဘူး ခင်ဗျ။ (ဒါပေမဲ့ တန်းဝင်တဲ့ခွေလို့တော့ ဆိုပါရစေ)
စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၉
၁၈ နာရီ ၅၃ မိနစ်
Labels: Burmese, Feature, Press, Song
Logo of 62 Mon National Day (Sangkhlaburi - Thailand
Mon Leaders' Speech
Nai Shwe Kyin (1913-2003)
"Our aim is to reclaim the traditional and historical homeland of the Mon people which was conquered by the Burmese in 1757 and which did not receive its own rights after independence from Great Britain in 1948."
Nai Non Lar (1918-1990)
"Must say and die in front of the state."
Nai Htin (1921-2005)
"The most thing that our enemy afraid is our unity."
Nai Htaw Mon
"Before we achieve our aim, we never surrender and retreat."
. English (8)
Joke ဟာသ (1)
© 2009 MonRaMon : မန်ရမန် · Proudly powered by Blogger & Green Park2by Cordobo.